18MAY Wax Dabaal Degyo Dhaafiisan Ma u Qor Sheynay, Hadaynu nahay Qurbe joogta/ Qalinkii Ifraax Cali Kirix | CeelSheekh News
18MAY Wax Dabaal Degyo Dhaafiisan Ma u Qor Sheynay, Hadaynu nahay Qurbe joogta/ Qalinkii Ifraax Cali Kirix
18 MAY wax dabaal degyo dhaafiisan ma u qorhseynay, hadaynu nahay qurbe joogta.
Waxaan jeclahay oo aan maanta qalinka u yara qaatay inaan dadkayga Somaliland ku bogaadiyo munaasibada 18 MAY xuska sanad guurada 27 aad ee ka soo wareegtay dib ula soo noqoshadii madaxbanaanida Somaliland.
Ka gadaal hambalyada waxaan jeclahay inaan su’aalo dhawr ah is weydiino gaar ahaan inteena qurbaha ku nool oo ay ugu horeyso munaasibada 18 MAY waxaan xaflado ka ahayn miyeynu ku xusnaa, ma se ku dhiiranaa oo ma qaban qaabinaa sidii aynu qadiyadeena meel wal oo sharcigu u fureyba u gaadhsiin lahayn.
Wakiiladeena dibadu maxay qabtaan ee soo kordhiyaan ee xidhiidh siyaasi iyo mid diplomacy leh iyaga oo ka faaidaysanaya cududa shacbiga maalintan soo ajiibay.
Hadaba ugu dambayn waxaan jeclahay inaan xasuusiyo dhamaan shacabka Somaliland gaar ahaan kuwa qurbuhu in munasibadan la weyneeyo sidoo kalena warbixino iyo qoraalo caalami ah dunida lala wadaago.